यि हुन श्रीमतीका नराम्रा बानी , जुन प्रायः श्रीमानहरुलाई मन पर्दैन – SajhaPana
यि हुन श्रीमतीका नराम्रा बानी , जुन प्रायः श्रीमानहरुलाई मन पर्दैन
साझा पाना २०७६ भदौ १७ गते ०४:४३ मा प्रकाशित
श्रीमान्-श्रीमती दुवैले एक-अर्कालाई मन नपर्ने बानीमा सुधार गर्नु पर्छ । जसका कारण तपाईंको वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर बनिरहन सहयोग पुग्छ ।
कतिपय श्रीमतीहरु कुनै पनि कुरालाई स्पष्ट रुपले व्यक्त गर्दैनन् । उनीहरु सधैं घुमाइ-फिराइ गरेर कुनै कुराको संकेत दिने प्रयास गर्छन् । त्यस्तो बेला जब श्रीमानले उनको कुरा बुझ्दैनन्, तब उनी उल्टै व्यंग्य गर्न थाल्छन् । त्यति गर्दा पनि श्रीमानले उनको कुरा बुझेनन् भने श्रीमतीहरु चिडचिडाउन थाल्छन् । त्यसैले श्रीमानहरु श्रीमतीले कुनै पनि कुरा स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरुन् भन्ने चाहन्छन् ।
कतिपय श्रीमतीहरु एकपटक बोल्न थालेपछि लगातार बोलिरहन्छन् । उनीहरुमा त्यति धेरै कुराहरु कहाँबाट आउँछ, श्रीमानहरुले थाहै पाउँदैनन् । साथीको विवाह गएर फर्किएपछि, डाक्टरलाई जचाएर आएपछि, छिमेकीको घरमा नयाँ वासिङ मेसिन अथवा अन्य कुनै विद्युतीय उपकरण आयो भने अथवा विषय जे भए पनि उनीहरु त्यसको ननस्टप कमेन्ट्री नै गर्न थाल्छन् । एक-एक मिनेटको अपडेट बिस्तारपूर्वक बताउँछन् । जबकी उनीहरुकै श्रीमान ती कुराहरु छोटकरीमा सुन्न चाहन्छन् ।
केही श्रीमतीहरु रहेक समय श्रीमानलाई विभिन्न प्रकारका आरोपहरु लगाइरहन्छन् । मानौं, उनीहरुले आफ्नो श्रीमानको हरेक गतिविधि अथवा बानीमा आपत्ति छ । जस्तैः आज यो डे्रस किन लगाएको ? आज किन चाँडै अफिस जान लागेको ? आज किन ढिला घर आएको ? यति धेरै फोनहरु किन गरिरहेको ? २-२ वटा मोबाइल फोन किन राखेको ? आदि जिज्ञासाहरुको लिस्ट निकै लामो हुने गर्छ । यस्ता प्रश्नहरु सोधेकोसोधै गरेर श्रीमतीहरुले श्रीमानहरुलाई सताइरहेका हुन्छन् । यो बानी पनि श्रीमानहरुलाई खासै मन पर्दैन ।
सपिङ गर्नु श्रीमतीहरुको ठूलो कमजोरी हो । कैयौ पटक त उनीहरु टाइमपास अथवा मन बहलाउन समेत सपिङ गरिदिन्छन् । उनीहरुको सपिङ निकै बोरिङ हुन्छ । एक-एक चिजहरुलाई ध्यान दिएर हेर्नु र तिनीहरुको मूल्य सोध्नु, कपडाहरुलाई शरीरमै लगाएर हेर्नु, आवश्यकता नभए पनि धेरैभन्दा धेरै खाने कुराहरु किन्नु, डिस्काउन्टको लोभमा धेरैभन्दा धेरै सामानहरु किन्नु र प्रयोग नै नगरी फ्याँकिदिनु वास्तवमै इरिटेटिङ बानी हो । श्रीमानहरुलाई श्रीमतीहरुको यो बानी त झन् पटक्कै मनपर्दैन ।
ट्याग : #श्रीमतीका नराम्रा बानी